तराईका किशोरी भन्छन् – ‘बाँधेको पशु स्वतन्त्र होला, हामी बन्दी छौं’ |
तराईका किशोरी भन्छन् – ‘बाँधेको पशु स्वतन्त्र होला, हामी बन्दी छौं’
प्रकाशित मिति :2017-08-06 16:20:11
सिरहा । तराईका ग्रामिण क्षेत्रमा विद्यालय तह पार गरेपछि किशोरीहरुले उच्च शिक्षा लिन निकै समस्या झेल्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले धेरै समस्या झेलेर मात्रै उच्च शिक्षा लिन पाएको किशोरीहरु बताएका छन् ।
सिरहाको मलन्मा गोबिन्दपुरकी एक किशोरी अहिले ल्याब असिस्टेन्ट पढ्दैछिन् । घर नजिकै रहेको माध्यमिक पुरा गरेकी उनले उच्च शिक्षाका लागि घर बाहिर बसेर पढ्न निकै मानसिक दबाब खेप्नुप¥यो ।
आठ बर्षमा बुबा गुमाएकी उनलाई आमाले नै लालन पालन र शिक्षा दिईन् । अहिले उच्च शिक्षा अध्यायनका लागि लहानमा कोठा भाडामा लिएर राखेकी छन् । पढाउन घर बाहिर राखेको भन्दै उनका आफन्त र छरछिमेकले ‘बुबा नभएको छोरीलाई शहरमा राख्दा बिग्रन्छन्’ भन्दै आमा र किशोरी दुबैलाई मानसिक दबाब दिने गरेको किशोरीले बताईन् ।
छरछिमेकीले छोरी एक्लै शहरमा बसेकी छे । के गर्छे कहाँ जान्छे ? भनेर काका काकीलाई कुरा लगाइदिने बताईन् । सोही कारणले आफुलाई थाहा नै नदिई विवाहको तयारी गरिरहेको उनले गुनासो गरिन् ।
उनी पढाईमा तेज छन् । बुबा सानैमा बितेकाले आफुले पढेर ‘केही गरेर’ समाजलाई देखाउने उनको अठोट छ । ‘मेरो बिबाह गर्ने उमेर भएको छैन । अठार बर्षको त हुँदैछु’ भनेर आफन्तलाई सम्झउँदा गाली गर्ने उनले बताईन् ।
‘बाँधेको पशु स्वतन्त्र होला तर हामी बन्दी छौ ।’ घरमा बुबा नभए आफ्नै परिवार भित्रका सदस्यले पनि साथ दिदैनन । बरु के गर्न सक्छस् भनेर हेप्ने उनले बताईन् ।
गोविन्दपुरकै अर्की किशोरी अहिले लहानमा बसेर कक्षा १२ मा पढ्दै छन् । उनको बुबा किशोरी १२ बर्षको हुँदा बिते । उनका एकजना दाजु छन् । उनी सहित दुई दुई जना दिदी बहिनी छन् । लहान बजारमा बसोबास गर्ने आफन्तले छोरीलाई बजारमा राख्नु हुँदैन भनेर परिवारलाई दबाब दिएको उनले बताईन् । उनीहरुले के गर्छन् ? भरोसा कसरी हन्छ ? परिवारको ईज्जतमा दाग लाग्छ । बरु समयमा नै बिबाह गरिदेउ । छोरी लाई पढाएर के हुन्छ भनेर घरमा भन्ने गरेको गुनासो गरिन् ।
चिनेका साथीसँग फोनमा कुरा गरेको र फेसबुक चलाएको कुरालाई समेत असामान्य बनाएर विवाह गरिदिन १८ बर्ष नपुग्दैदेखि दबाब दिएको उनले बताईन् । यसरी प्रत्येक पाईला पाईलामा रोक लगाउँदा नसकेको मानसिक तनाब हुने गरेको उनले गुनासो गरिन् ।
तराईका सीमित परिवारका महिलाहरुले मात्र स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो क्षमता अगाडि बढाउन पाएका छन् । अन्य महिलाले बाल्यवस्थादेखि नै क्षमता बढाउने अवसर पाउँदैनन् । पढाइबाट समेत वञ्चित हुनुपर्छ । जेएस मुरारका बहुमुखी क्याम्पस लहानका प्रचार्य कनैया भट्ट समाज परिवर्तन भएपनि समाजमा बस्ने मानिसको मानसिकतामा परिवर्तन नहुँदा किशोरीहरुले खुल्ला वातावरणमा क्षमता बढाउन नपाएको बताउँछन् ।
आमा बाबुको शिक्षाको स्तर, समाजमा बसोबास गर्ने मानिसहरुको प्रवृति, श्रीमान्ले श्रीमतीलाई दिने ईज्जत कस्तो छ त्यहि अनुसार बालिका तथा किशोरीले अवसर पाउने उनको भनाई छ ।